Mitady Visio ... aka ... Manontany tena ny olona Maninona aho amin'ny Mac | Martech Zone
Zoma, Martsa 28, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manontany tena ny olona hoe maninona aho no tsy mampiasa Microsoft toa ny taloha. Mihevitra ny olona sasany fa sangisangy fotsiny ny zavatra PC / Mac iray manontolo. Noheveriko ny PC mifanohitra amin'ny Mac vazivazy ihany koa ny zavatra. izany tsy. Nandeha Mac tamin'ny fomba ofisialy aho izao herintaona.
Ary simba aho.
Ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fiasana amin'ny Mac dia ny fiasana amin'ny PC ihany koa. Ataoko isan'andro any am-piasana izany. Vao haingana aho no nametraka ny Vista (mbola bluescreens aorian'ny hibernation) ary mila misintona sy mametraka indray ny Microsoft Visio Standard Edition. Mora, sa tsy izany? Novidiko tamin'ny Microsoft an-tserasera izany ka handeha aho ary misintona azy indray, ary hamerina azy io indray.
Mankany amin'ny lozika aho, Microsoft Download Center. Misy beta Silverlight an'ny Microsoft Download Center ka mitady izany aho! Tsindrio fotsiny ny "Visio" amin'ny saha "fampidinana karoka". Ity no voalohany amin'ny valiny 119:
Inona ny valiny voalohany? Tsy Visio mihitsy… ity ilay 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF na XPS. Huh? (Tsy hanandrana hamantatra akory aho hoe nahoana ny valiny voalohany no laharana # 31). Noho izany, namaky sy nandamina ary namaky sy nandahatra ary nanitatra aho mba hanehoana valiny 100… Tsy afaka mahita an'i Visio na aiza na aiza aho… mpijery vitsivitsy fotsiny ary banga hafa.
Ho any amin'ny tranokalan'ny Office! Hatramin'ny nividianako ny Visio an-tserasera dia nieritreritra aho fa afaka miverina amin'ny fivarotana amin'ny alàlan'ny Microsoft. Mandehandeha kely etsy sy eroa aho fa hitako… Visio Standard Edition. Ary eo amin'ny sisin'ny havia… Fividianana teo aloha! Yahoo !!!!… er… Wahooo no tiako holazaina !!! Tsindrio ny Fividianana teo aloha dia mipoitra ny nomeraom-fakoko. Eny !!!! Saika teo !!!! Tsindrio ny fividianana ary izao no azoko:
Ouch. Mampiasa Internet Explorer 7 aho… na dia tsy manao risika an'ity amin'ny Firefox aza aho. Manadio ny mofoko aho. Miverina miverina aho, kitiho ny faktiorako… ary….
Mitsentsitra Microsoft ianao! Eo sy ivelan'ny tranonkala… mitsentsitra ianao! Ankehitriny tsy vitako ny manao ny tetikasako anio miaraka amin'ilay rindrambaiko diso fanantenana aho noho ianao nahatonga ahy hanatsara izay nandoa vola $ 150 hafa izay tsy azoko alaina sy tsy azoko ampiasaina.
Tena manontany tena ny olona hoe maninona aho amin'ny Mac.
Tsy mahagaga raha mihasimba ny marika Microsoft. Ho gaga aho raha fantatro raha mila mampiasa ny vokatr'izy ireo manokana na tsia amin'ny Internet na tsia ny mpiasa ao amin'ny Microsoft.
Mar 28, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
Eny, marary amin'ny M$ crap koa aho. Vao haingana aho no nitsambikina tamin'ny Outlook 07 ary nandeha tany amin'ny Mozillas Thunderbird.. Faly aho nanao. Hametraka birao misokatra atsy ho atsy koa ny fanalana ny fakon'ny birao M$ sisa.
Tena mieritreritra ny hanao ny mitsambikina ary tsy mampiasa afa-tsy linux amin'ny masiniko ankehitriny. Lasa tena mora ampiasaina izy io tato ho ato ary ny ankamaroan'ny rindrambaiko winblows dia manana safidy mifanentana amin'ny linux amin'izao andro izao.
Tsy azoko antoka raha sahy maka mac aho.
Mar 28, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
Tena nofy ratsy!!! Microsh*te! Rehefa mianatra isika olona…. Ho tratry ny olana REAL i Microsoft rehefa tonga saina tampoka ny vondron'orinasa fa hamonjy fotoana sy vola izy ireo rehefa mifindra amin'ny Mac ary tsy mampiasa ny vokatra Microsoft intsony.
Mar 28, 2008 ao amin'ny 7: PM PM
Na izany aza, rehefa namaky ilay lahatsoratra aho dia misy rohy hividianana Office 2003 sy 2007 ny rohy Google Ads anao eo amin'ny faran'ny fidiranao.
Ary ny doka Mac eo amin'ny sisiny, mifangaro amin'ny Office fanampiny fanampiny.
Indraindray dia tena mahafinaritra ny fomba mety hisehoan'ny kaody dokambarotra mandeha ho azy amin'ny fotoana mahaliana indrindra. Ny lahatsoratrao miaraka amin'ny doka "ara-potoana" dia nahatonga ny takarivako 🙂
Mar 28, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Ha! Toa izany foana ry Bob a! Isaky ny manapoaka olona aho, dia mivoaka amin'ny tranokala ny dokany. Mampihomehy loatra.
Mar 29, 2008 amin'ny 1: 08 AM
Open Office dia eto 2.4 ary ny 3.0 dia ho lasa dingana iray tsara kokoa aza. Misy ihany koa ny fanitarana mba ahafahan'ny olona mampiasa LaTeX amin'izao fotoana izao…
Mar 29, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Ampiasao fotsiny ny OmniGraffle Pro. Visio dia bloat-tastic na izany aza.
Apr 1, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Nahazo vintana tsara tamin'ny OmniGraffle Pro koa aho, Jason. Maniry aho fa mifanaraka tanteraka amin'ny Visio (na ny mifamadika amin'izany), na izany aza! Manana mpanjifa mampiasa Visio aho.
Mar 29, 2008 ao amin'ny 2: PM PM
Fantatrao fa tsy ho ratsy loatra ny Mac raha tsy ho an'ny Mac rehetra. 😉
Ha! Tena marina ianao ry Mike. Vondrona saro-kenatra izahay - indrindra ireo olona toa ahy izay lalina tamin'ny teknolojia MS nandritra ny 2 taona farany!
Apr 1, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Tsy dia nanana olana firy aho tamin'ny vokatra Microsoft. Oh, nanana olana be dia be aho tamin'ny Internet, saingy tsy misy manakiana. Noho ny tsy fahatokisana amin'ny Internet amin'ny ankapobeny dia aleoko manana dika mitovy amin'ny programa rehetra vidianako, indrindra rehefa lafo izy ireo. Ny sekoly taloha, fantatro.
Mampihomehy izany, saingy nanana olana bebe kokoa aho tamin'ny Mac sy Linux noho ny tamin'ny Windows, ary toa tsy mandeha amiko mihitsy ny programa open source. Azo antoka fa tsy noho ny tsy fahampian'ny fahalalana ara-teknika (efa nampiasa ordinatera aho hatramin'ny andron'ny DOS).
Ary koa, nahoana ny olona no manolo tarehin-tsoratra rehefa manoratra "Microsoft"? Ny tiako holazaina dia tsy toy ny hoe hampitombo ny fahefana tsy masina an'i Bill Gates hitondra an'izao tontolo izao ny fanononana azy. Toa adala fotsiny.
Ity lahatsoratra ity dia fanehoan-kevitra goavana noho ny fahasorenako tamin'ny tranokalan'izy ireo. Heveriko fa ny fifandraisana dia somary tsy mifandray amin'ny mpampiasa azy i Microsoft. Ny olana amiko dia tsy momba ny logiciel (tamin'ity indray mitoraka ity ;), tena momba ny serivisy mpanjifa.
Raha ny tadidiko dia efa toy izany foana. Somary tsy azo hatonina i Microsoft ary nanome baiko ny tari-dalana… zavatra toy ny fananana navigateur tsy mampihatra ny fenitra, ny fananganana modely fiarovana izay miasa amin'ny rindranasa miorina amin'ny Microsoft ihany, ary ny tsy firaharahana ny fenitra hafa – toy ny fenitry ny antontan-taratasy.
Tena manaja ny zava-bitan'izy ireo aho, saingy mino aho fa ny fankahalan'izy ireo amin'ny olon-kafa eny amin'ny habakabaka dia mahazo ny tsara indrindra amin'izy ireo. Ny fijerena iray amin'ny lahatsarin'i Steve Ballmer dia milaza izany ho ahy!
Aza diso aho, manana ny maha-izy azy koa i Jobs. Jaka izy raha mamaky ny gazety Wired farany. Saingy heveriko fa mifantoka kokoa amin'ny fanovana ny sata misy azy ny sainy ary miezaka manamora kokoa sy manara-penitra kokoa ho an'ny 'kulto' azy.
Apr 14, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
Fanamarihana fotsiny, Microsoft dia nanara-maso mailaka momba ny fampidinana androany, 4/14/2008 miaraka amin'ny rohy azo alaina sy ny fanalahidin'ny vokatra hapetraka.